1 Twoje opcje
2 Ny Face Off: WordPress kontra twórcy stron
2.1 1 – Elastyczność
2.4 4 – Wtyczki i dodatki
2.5 5- Koszt
2.7 7- Ograniczenia
2.8 8- Popularność
Raha te hanongana tranokala iray amin’ny vidiny mora ianao, dia manana safidy roa lehibe – fananganana iray amin’ny WordPress, manangana iray amin’ny iray amin’ireo dragona maro sy mpamono tranokala DIY azo alaina (Wix).
WordPress dia maimaim-poana ny fampiasana ary azo alamina amin’ny server rehetra izay manohana ny PHP sy MySQL, isay saika ireo serivisy rehetra maneran-tany no manao an’ity androity. Ny mpikarakara tranokala dia matetika mandoa vola isam-bolana raha toa ka te hampiasa azy ireo ianao.
Ny Face Off: WordPress kontra twórcy stron
1 – Elastyczność
WordPress dia mahery, saingy manana ny mari-pahaizana fianarana izy. Twórcy stron internetowych dia tsy dia matanjaka loatra fa mora kokoa amin’ny fampiasana. Nowy Fiaraha-Miombon’antoka Dia Toy Izao Manaraka Izao:
Ireo mpanorina tranonkala tsara dia manana tonian-dahatsoratry ny sehatry ny pejy izay ahafahanao mamolavola singa ao anaty tranonkala. WordPress tsy manana maso interfejs. Fa kosa, misy WYSIWYG (izay hitanao fa azonao) edytor.
Ankehitriny dia misy fomba sasantsasany ahafahana mamorona tonian-dahatsoratra mivantana amin’ny WordPress. Ny bitsin’ny rindrambaiko sasany dia afaka manampy io fonctionna io, saingy hitantsika fa tsy misy na dia kely na mora ampiasaina toy ny fanodikodinam-pahefana Miaraka amin’ireo mpanamboatra tranonkala DIY.
Darmowy kreator stron internetowych FastWebHost – tonga isaky ny fonosana fampiantranoana.
Ireo mpamboly tranokala dia tsy dia marefo loatra. Izy irre dia natao hananganana tranonkala mahazatra toy ny orinasa madinika sy trano fisakafoanana. Ny ankamaroany dia hanampy ampamoaka vaovao isanandro, saingy mbola tsy mavitrika tahaka ny famoronana ny tenanao amin’ny WordPress.
Miaraka amin’ny fanodikodinam-pahefana, dia manova zavatra ao anatin’ny rafitra ianao. Azonao atao ny mampifanaraka ny zava-drehetra ao anatin’io rafitra io, saingy ny drafitra fototra sy ny fizotry ny tranonkala dia mitovy ihany. Ireo mpamboly tranokala dia mirehareha amin’ny fananana ireo "tsara indrindra" izay manaraka ny fomban-drazana nomem-boninahitra. Tsy voatery hisalasala ianao raha toa ka azo alaina ny tranokalanao, saingy tsy hahazo tombony amin’ny famoronana tranonkala koa ianao.
Jereo kely Designer Gleb lub Duplos mba hijery ny dikany.
4 – Wtyczki i dodatki
Ny iray amin’ireo tanjaka amin’ny WordPress dia ny fiarahamoniny goavana. Namorona ity fiaraha-monina ity lohahevitra an’arivony sy plugins ho an’ny WordPress. Izany dia manitatra ny asan’ny tranonkalanao. Raha manana hevitra ianao, dia azo inoana fa hitanao ny plugin izay mamela anao hanao izany. Saingy satria ireo pluginów ireo dia noforonin’ireo olona samihafa izay afaka manatanteraka tsy an-kijanona. Ny plugin dia mety ilainao hanatsotra ny code amin’ny loha-hevitrao, man man plugin hafa mba hiasa tsara.
Ireo tranobe mpikarakara tranokala dia tsy manana plugins maro na lohahevitra toy ny WordPress. Fa, satria tafiditra ao an-trano avokoa ny fanampim-panaovan’izy ireo, ny ankamaroan’izy ireo dia ho tsara ihany raha tsy mila mampiasa azy ireo ianao. Ny tsy mitongilana dia mazava ho azy fa tsy hahita plugins amin’ny zavatra rehetra ianao. Indraindray ianao dia mila manao tsy misy.
Nowy Tombony nie ma już WordPress i wtyczki manana maimaim-poana. Nowe wtyczki ankabeazan’ny dia maimaimpoana. Na dia mety mila mividy aza ianao mba hahazoana plugins mahery na singa hafa manokana, ny adiresy maimaim-poana dia tsara ho an’ny rehetra. Ny ankamaroan’ny tranokala fananganana tranonkala amin’ny lafiny iray dia voakasina na famandrihana.
WordPress no mahatonga ny tranokalan’ny fanorenana mora, nefa mbola mila fotoana sy fahaizana ihany koa izy. Izany no antony fananana mpandrindra iray Mety ho lafo (na dia kely noho ny eritreritrareo) aza. Ny tranonkala iray mahazatra dia mety handany 800 $ + (amin’ny farany ambany). Ny fikojakojana ny vohikala dia mety Mbola mitaky mpandraharaha mahaleotena hanampy anao, izay mitaky sazy fanampiny. Avy eo dia misy ihany koa ny vidin’ny fividianana domain (matetika 1,50 $ hatramin’ny 14 $ isan-taona) ary ny fampiantranoana (12 $ / taona +) Ny ankamaroan’ny mpanorina tranonkala dia manomboka amin’ny latsaky / volana. Azonao atao ny manoratra ny tenanao ary manova kopia, mampakatra sary, manampy pejy vaovao anatin’ny segondra. Mbola mila mandoa ho an’ny faritra misy anao ianao, fa ny fampiantranoana kosa dia tafiditra ao.
Strona internetowa MpanorinaVidiny (isam-bolana)
Fast Web Host Darmowy hosting miaraka amin’ny (manomboka amin’ny 1 $ / volana)
BoldGrid 4,19 USD / mc
SiteBuilder 4,99 USD / mc
Wix 9,25 USD / mies
Doodlekit.com 10,00 USD / mc
Weebly.com 12,00 USD / mc
SquareSpace 18,00 $ / mies
Ny tombony le hohe an anny WordPress dia afaka manosika azy hatrany amin’ny tranonkala hafa izay manolotra fifanarahana tsaratsara kokoa na tolotra tsara kokoa (na roa). Amin’ny tranonkala mpamorona tranokala, ianao dia eo amin’ny fandraisana azy ireo mandrakizay.
Ny ankamaroan’ny mpikarakara tranokala dia hanana fetrany sasany, toy ny be dia be ny fifamoivoizana (przepustowość), na dia amin’ny safidy lafo vidy aza. Ny sasany mety mampiseho ny dokam-barotra ao amin’ny tranokalanao miaraka amin’ny sarany ambany sarany.
Miaraka amin’ny WordPress, voafetra ny haingana amin’ny haingam-pifidianana. Azonao atao ny mametra ny fetra sasany saingy misy foana ny fampivoarana any amin’ny toerana izay azonao atao mba hiverina amin’ny asa tanteraka.
Ilaina ny tranokala iray tsy manana ny moôdelina
Erytrereto ny fifamoivoizana be
Na dia izany aza, aza mamela ny fanapahan-kevitry ny fanapahan-kevitra ho anao – indraindray ianao dia mila mamela ny tananao maloto ary manandrana zavatra. Manoro hevitra anao izahay Mifidy ny tranonkala tsara indrindra izay manolotra fanohanana of WordPress sy tranokala maimaim-poana. Raha manao ilay asa ho anao ny tranonkala mpanorina, dia ankafizo, miarahaba anao. Raha tsy izany dia manana fampiantranoana izay azonao atao ny mametraka WordPress amin’ny alalan’ny tsindry iray.
Rupi S. Azrot no tale jeneralin’ny FastWebHost – orinasa fampiantranoam-barotra amin’ny Internet. Nandritra ireo taona 17 taloha dia FastWebHost no nampiantrano ny domains 200,000 ao amin’ny foibe data-n’ny 6 manerantany. Nanangana FastWebHost i Rupi rehefa vita ny Masters avy amin’ny Oniversiten’i California. Raha mikasa ny tetikasa vaovao iray ianao, dia faly izy manampy.
Ny asa fanorenana tranokala dia asa mafy, saingy tsy voatery ho pilih izany. Tsy